Muwaadin Dab Qabadsiiyay Dukaan Sandaqadeed Yar Oo Uu Badhtamaha Magaalada Hargeysa Ku Haystay – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN) Mujaahid Maxamed Axmed Coofiye oo ka mid ahaa mujaahidiintii SNM ee xoraysay dalka ayaa dab qabadsiyay Dukaan yar uu ku haystay suuqa nka dib badhtamaha magaalada Hargeysa. Kadib markii uu ka murugooday hawlagalka maalmihii u danbeeyay dawladda Hoose ee
Hargeysi ka wadeen suuqyada iyo wadooyinka magaalada.
Ganacsadahaa ayaa go’aanka uu ku gubayo gebi ahaanba meheradiisa qaatay. Kadib markii digniintii ugu danbaysay ay ugu sheegeen inuu ka guuro goobta ay ku taalay meheradiisu ee badhtamaha magaalada Hargeysa dhismaha xawaalada Qaran ee la xidhay oo dhinaca woqooyi kaga beegan Cadaani Cafeteria.
Dad goob joog ah ayaa u sheegay Weriye ka socday shebekadda Araweelonews oo goobta tegey inuu Ninkaasi Batrool iyo dab qabadsiiyay dukaankiisa, isla markaana dhaawac kasoo gaadhay gacanta, balse ay dadkii goobta ka dhowaa ku guulaysteen inay bakhtiiyaan dabkaa.
Ciidanka Booliska ayaa goor danbe goobta yimi, iyadoo uu baxsaday Muj. Coofiye intii lagu guda jiray bakhtiinta dabka oo ay kusoo xoomeen dad badani.
Dhacdadan ayaa ku soo beegantay xili ay maalintii afaraad hawl-gal wado banyan ah ka socdaan jidadka Magaalada Hargeysa, kuwaas oo wadooyina hareerahooda laga raray Boqolaal Xoogsato ah oo ku ganacsan jiray, waxayna dadkaa danyarta, kuwaas oo cabasho xoogan ka muujiyay hawl-galkan lagaga raray goobihii ay ku ganacsan jireen, iyadoo aanay jirin wax qorshe ah oo loo sameeyay dadkaa.
Mid ka mid ah Mujaahidiinta aqoonta u lahaa ninkaa oo ku sugnaa goobtaa markii la bakhtiiyay dabka ayaa u sheegay weriye ka tirsan Araweelonews in Muj. Maxamed Axmed Coofiye oo ah ninka falkaa ku kacay nin ka mid ahaa mujaahidiintii SNM ee xoraysay dalka, isla maraakana uu ka mid ahaa qoysas dhowaan lagaga raray Cusbataalkii hore ee ja-jabka ee duleedka Cusbitaalka Hargeysa, isla markaana 17 February 2012. La xidhay xarunta xawaalada Qaran oo uu ka shaqayn jiray. Sidoo kale Mujaahidkaa oo ay saaxiiibo ahaayeen ayaa xusay in Ninka falkaa ku kacay ay dhowaan geeriyootay xaaskiisii, isagoo gacanta ku hayay waqtigan caruurta rajada ah ee Hooyadaasi u dhashay oo uu nolol maalmeedkooda la xarbiyay.
“The self-declared independent state in the north-west corner of conflict-ridden Somalia has been an oasis of calm, and it is now seeking foreign investment” The Guardian